बीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज सेवा
कोशी अनलाइन सोमबार, २४ पुष, २०७४ मा प्रकाशित
बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज सेवा सुरु भएको छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत आम नागरिकलाई ध्यानमा राखी यस्तो प्याकेज सेवा सुरु गरिएको हो । सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज शुल्क रु. ४ हजार र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज शुल्क रु. ८ हजार निर्धारण गरिएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकृत सुजेन्द्र तामाङले बताए ।
यो सेवामार्फत् कुनै रोगको लक्षण देखिनुपूर्व नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ जीवन जिउने नागरिकको चाहना पूरा हुने विश्वास प्रतिष्ठानले लिएको छ । प्रतिष्ठानले कन्सल्टेन्ट चिकित्सकको रोहबरमा सामान्य तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज सेवा सन्चालनमा ल्याएको अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहले बताएका छन् ।
उनले प्रतिष्ठानको अस्पताल प्रशासनमा सम्पर्क राखी छिटो, छरितो र सहज ढङ्गबाट यो सेवा लिई लाभान्वित हुन सबै इच्छुक सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेका छन् ।
आजबाट चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना, चार प्रदेशमा पहिराे र डुवानको जोखिम
प्रिमियर लिग : सिटीको फराकिलो जित
सालाह चम्किँदा लिभरपुलको सहज जित, सिटीभन्दा २३ अंकले अगाडि
स्वारेजको गोलमा बार्सिलोनाको जित, रियलमाथि दबाब